पिसाब फेर्न गाएकी २१ वर्षिय आशाले यस्तो गर्लिन् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्! – sudursanchar2
August 5, 2021 August 5, 2021 AdminLeaveaComment on पिसाब फेर्न गाएकी २१ वर्षिय आशाले यस्तो गर्लिन् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्!
२१ बर्षिया आशा राई विवाहित हुन् । आशा हुँदा हुँदै उनका श्रीमानले दुईवटा श्रीमती विवाह गरिसकेका छन् । रोजगारको सिलसिलामा आशा ओमन पुग्नु भएको थियो । त्यहाँ रहँदा उहाँको कपिलबस्तु घर भएका केटासँग चिनजान भयो । अन्ततः उनिहरु लि भि ङ्ग टु गेदरमा बस्न थाले । केटा उतै रहे आ शा घ र फ र्कनु भयो । नेपाल फर्किए पछि सँगै बस्ने र विवा ह गर्ने कसम खाएका थिए । नेपालमा निषेधाज्ञा तथा विविध कारण लि भिङ्ग टु गेदरमा रहेका साथि फर्किएनन् । आशा नेपाल आए लगत्तै खोटाङ्ग पुग्नु भयो । प्रारम्भिक बयानमा आशाले पहिलो एक महिना मिन्स भएको बताउनु भएको छ ।
दाम्लोले बाँ’धेर एक युवकलाई कु’ट्’ने वडाध्यक्ष यिनै हुन्, अन्तत परे फन्दामा
#Breaking कक्षा १२को परिक्षा स्थगित भएपछि नयाँ मोडालिटि सार्वजनिक